WHO oo war ka soo saartay waxyeelladii ka dhalatay fatahaadaha dalka – Hornafrik Media Network
WHO oo war ka soo saartay waxyeelladii ka dhalatay fatahaadaha dalka
By Liibaan Nuur	 On Nov 8, 2019
Hey’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa sheegtay in fatahaadihii dhowaan ka dhacay qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya ay ku dhinteen 25 qof, halka 47 kalena ay ku dhaawacmeen, xilli ay wali roobab culus ay ka da’ayaan qeybo ka mid ah dalka.
WHO ayaa sheegtay in roobab mahiigaan ah oo ka hooray dhawr qeybood oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 270,000 oo qoys, waxaana burburay hab nololeedkii dadka iyo kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka qeybaha ay ka saameeyeen fatahaadaha iyo daadadkii ka dhashay roobabka.
Xaaladaha adag ee ka jirta qeybo ka mid ah goobaha ay daadadku saameeyeen ayay sheegtay hey’addu in ilaa hadda lala gaaray qadar yar oo Naf badbaadin ah, balse ay wali dadku u baahanyihiin in laga samata bixiyo qatartii dhacday iyo kuwo hor leh oo ku soo wajahan qeybo ka mid ah dalka.
Xafiiska Qaramada Midoobey u qaabilsan isuduwidda arrimaha Bani’aadamnimada (OCHA) ayaa dhowaan sheegay in dad ka badan 547,000 oo qof in ay saameeyeen fatahaada ku dhiftay qeybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya.
Guddoomiye Cumar Filish oo safarkii u horeeyay ugu ambabaxay dalka Koonfur Afrika
Wasiir Cawad oo shir uga qeyb galay Tanzania kana dalbaday dalalka Nordic maalgashi